रु. ६ करोडको लगानीमा लेखपोखरा बृहत खानेपानी आयोजनाको काम शुरु « Salyan Today
रु. ६ करोडको लगानीमा लेखपोखरा बृहत खानेपानी आयोजनाको काम शुरु
सल्यान ५, चैत ।
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ लेखपोखरामा बृहत खानेपानी आयोजना शुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको रु. ६ करोड बढीको बजेटमा बहुवर्षिय योजना मार्फत खानेपानीको काम शुरु भएको हो । मानव बस्ती वरपर खानेपानीका मुहान नहुनु तथा भएका मुहान पनि गर्मीयाममा सुकेर जाँदा लेखपोखरावासीले बर्षौ देखी खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका छन् ।
सल्यान प्रदेश सभा ख बाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको बिशेष पहलमा अहिले खानेपानी आयोजनाको काम धमाधम रुपमा भैरहेको छ । जामुना रुख, हिलेखालीमा रहेको मुहानबाट सोलार लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत पानी महानेटामा तानेर गाउँ गाँउमा वितरण गरिने छ ।
जसको लागी अहिले मुहान तथा पानी संकलनको लागी महानेटामा ट्यांकी निर्माण गर्ने काम चलिरहेको लेखपोखरा बृहत खानेपानी आयोजना निर्माण समितीका अध्यक्ष गोबिन्द केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ट्यांकी निर्माण, सोलार खरिद तथा जडान, लगाएतका काम गर्नका लागी ठेकेदार मार्फत काम भैरहेको छ ।
‘अहिले ट्यांकी निर्माणको काम भैरहेको छ, हामीले छिटो भन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने गरी ताकेता गरिरहेका छौँ, मुहान देखी करिब ८ किमी टाढाको बस्ती सम्म पानी लैजाने योजना छ’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले पाईप लाईन बिस्तारको समयमा भने उपभोक्ताहरुले पनि श्रमदान गर्ने बताउनुभयो ।
एक घर एक धाराको अबधारणामा आधारित रहेर लेखपोखरा बृहत खानेपानी आयोजनाको काम सञ्चालन गरिएको वडाअध्यक्ष लिलाधर घर्तीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस आयोजनाबाट साबिकको लेखपोखरा गाविस वडा नम्बर १, २, ४, ५, तथा ६ र ८ का केही बस्तीहरुमा खोनपानी पुर्याईने बताउनुभयो । यस आयोजनाबाट वडाका ८ सय २० घरधुरी मध्ये करिब ५ सय बढी घरधुरी लाभान्वित हुने छन् ।
विगतमा लेखपोखरामा निर्माण गरिएका पुराना खानेपानीका योजना जीर्ण बन्नु तथा बस्ती वरपरका खानेपानीका मुहान सुक्दै गएका कारण स्थानिय खानेपानीको अभावमा काकाकुल बन्दै आएका थिए । बृहत खानेपानी आयोजना मार्फत घरघरमा खानेपानी धारा जडान गरिने भएपछि स्थानियले खुसी ब्यक्त गरेका छन् ।